9 Shahaadooyinka Ganacsiga ee mudan in la helo iyo Sababta 2022
9 Shahaadooyinka Ganacsiga ee mudan in la helo iyo Sababta
Waxaan ku soo bandhignay qodobkaan qaar ka mid ah shahaadooyinka ganacsi ee caalamiga ah ee ugu wanaagsan ee mudan in la siiyo qof walba oo doonaya inuu yeesho muuqaal ganacsi oo heer sare ah. Qaar ka mid ah shahaadooyinkan ayaa laga dalban karaa oo laga heli karaa khadka tooska ah dhammaantoodna waa kuwo aad loogu baahan yahay.
Shahaadooyinku waxay kaa caawin karaan inaad si dhakhso leh u kasbato oo aad u ansaxiso xirfado qiimo leh iyo aqoon-u leh degmo ka sii horumarin doonta xirfaddaada wixii ka baxsan maskaxdaada. Waxay qiime ku darayaan CV-gaaga xirfadeed waxayna ka caawinayaan inay ku qanciyaan loo-shaqeeyahaaga awoodda aad u leedahay inaad shaqo qabato.
Macno malahan inta ay leegtahay ama gaabantahay mudadaada ay kujirtay warshada aad ka shaqeysid, helitaanka shahaado ma noqon karto waqti hore ama goor dambe sidaa darteed fursad u hel inaad hesho hal ama labo ama kabadan maanta oo aad diyaar u ahaato inaad xoojiso shahaadadaada iyo xirfaddaada.
Shahaadooyinka Ganacsiga ee mudan in la helo
Xirfadlayaal Falanqaynta Ganacsi La-caddeeyay (CBAP)
Shuruudaha Codsiga CBAP
Xirfadlaha Maareynta Mashruuca (PMP)
Shahaadada Ganacsiga ee Salesforce
Soosaaraha iibka iibka
Shahaadada Xirfadeed ee Hogaaminta Kooxda
Shahaadada Xirfadlaha Bixinta Qeybta Shahaadada leh (CSCP)
Shahaadada Ganacsiga Suuqgeynta Inbound
Hanti Dhawraha Nidaamyada Macluumaadka Macluumaadka (CISA)
Hubsade Anshax Anshax leh
Halka Laga Qaado Koorsooyinka Shahaadada Ganacsiga
Suuqgeynta Inbound ee HubSpot
Xirfadlaha Xogta Shahaadaysan (CDP)
Faahfaahinta hoose waxay maskaxdaada u fureysaa sababta shahaadooyinkan ganacsi ee halkan ku taxan ay mudan yihiin in la helo waxayna sidoo kale kaa caawinayaan inaad go'aansato midka ku habboon waxa aad rabto inaad gaarto.
Shahaadada ganacsiga ee CBAP waxaa bixiya Machadka Caalamiga ah ee Falanqaynta Ganacsiga. Si aad isugu qorto barnaamijkan shahaadaynta ganacsiga caalamiga ah, waxaad u baahan doontaa ugu yaraan dhowr sano oo waayo-aragnimo hore ah oo ku saabsan falanqaynta ganacsiga.
CBAP waa mid ka mid ah shahaadooyinka ganacsi ee ugu sarreeya dalabka waxaana kaliya haya qabta falanqeeyayaal xirfadlayaal ganacsi ah oo weli ku firfircoon ciyaarta oo leh rikoor raadraac mudan oo la raad raaci karo.
3dii sanoba mar ka dib, dib u xaqiijinta shahaadadan ayaa la sameeyaa oo qof kasta oo heysta iyada oo aan loo hayn caddeyn hadda socota ee horumarka xirfadeed ee socda, qoraaga joornaalka ganacsiga ama ugu yaraan qaar ka mid ah falanqaynta ganacsiga shaqooyinka aan faa'iido doonka ahayn ayaa lumiya dib u xaqiijin.
Shahaadada CBAP waxay leedahay xeer anshaxeed oo qof kasta oo sita shahaadadan ay tahay inuu u hogaansamo oo dayaca ka yimaado mid ka mid ah anshaxaasi wuxuu u horseedi karaa in laga noqdo ansaxnimada shahaadadiisa ama iyada.
Waa inaad ogaataa in marka la barbar dhigo CBAP, IIBA ay iyaduna bixiso Shahaadada gelitaanka ee Falanqaynta Ganacsiga (ECBA) iyo kan Shahaadada Awoodda Falanqaynta Ganacsiga (CCBA). Dhamaan shahaadooyinkan waxaa loo hayaa si sharaf iyo qadarin caalami ah.
Haddii aad raadineyso shahaadooyin ganacsi oo sumcad leh internetka, kuwani waxay noqon karaan xulashadaada ugu fiican.
Ugu yaraan 5 sano oo khibrad shaqo ah oo ku saabsan falanqaynta ganacsiga
Ugu yaraan 7,500 saacadood oo falanqeyn ganacsi ah oo leh caddeyn la xaqiijin karo
Ugu yaraan 35 saacadood oo horumar xirfadeed ah
Laba tixraac oo rasmi ah oo ka imanaya maareeyayaasha shaqada ama macaamiisha faraxsan
Waa inaad ogaataa in koorsooyinka fasalka iyo khadka tooska ah, webinarrada, kal-fadhiyada raadinta shirarka, casharrada, furayaasha, aqoon-isweydaarsiyo iyo is-barasho toos ah oo ay aqoonsan tahay IIBA dhammaantood waxay ku xisaabtamayaan horumarinta xirfadda.
Si loo helo shahaadadan, musharixiinta mustaqbalka waa inay buuxiyaan shuruudaha dalabka, dalbadaan oo ay bixiyaan khidmadda dalabka CBAP oo qiyaastii ah $ 60, qaado imtixaanka oo ay helaan boqolkiiba baasaboor lagu qanco.
Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay 125 su'aalood oo xulashooyin badan ah oo ay tahay in lagu dhammaystiro wax ka yar 3.5 saacadood.
Waxaa jira mowduucyo aad u tiro badan oo ku hoos jira imtixaanka oo ay ka mid yihiin falanqaynta istaraatiijiyada, qiimeynta xalka, maareynta meertada nolosha iyo qorshaynta falanqaynta ganacsiga.
Inaad horumariso xirfaddaada ganacsi waxay ka dhigan tahay inaad qaaddo masuuliyado hoggaamineed oo badan; markaa baahida loo qabo in si wax ku ool ah loo maareeyo dadka iyo mashaariicda labadaba iyo baahida loo qabo in aan la iska indhatirin shahaadadan ganacsi maadaama ay mudan tahay ilaha loo galiyay sugitaankiisa.
Shahaadada Maareynta Maareynta Mashruuca (PMP) waa shahaado caalami ah oo loo aqoonsan yahay maareeyayaasha mashruuca. Helitaankeeda waxay ka dhigan tahay horumarin ku saabsan shaqaalayntaada iyo rajadaada mushahar ee qaybta ganacsiga maaraynta mashruuca.
Si loo helo shahaadadan, waxaad u baahan doontaa inaad ku gudubto imtixaanka 200 su'aalood oo xulashooyin ah adigoon isticmaalin wax tixraac ah imtixaankani wuxuu daboolayaa mowduucyada sida qorshaynta mashruuca, fulinta mashruuca iyo kormeerka mashruuca.
Si aad isugu qorto barnaamijkan, waxaad u baahan tahay khibrad hore oo ku saabsan maaraynta mashruuca. Ugu yaraan shahaado sare, sida shahaadada jaamacadeed iyo 35 saacadood oo waxbarashadii hore ee maaraynta mashruuca ah. Koorsadani waa mid qaali ah $ 555 kuwa aan ka tirsanayn Machadka Maareynta Mashruuca.
Maxaad ugu baahan tahay inaad ka fiirsato helitaanka koorsadan maxaa yeelay meel kasta oo aad ka shaqeysid, waxaad ku qasban tahay inaad ku lug yeelatid mashaariic iyo inaad aqoon iyo caddeyn u leedahay Maareynta Mashruuca iyada oo aan loo eegin xirfaddaada ay tahay had iyo jeer waxay ku siin doontaa faa'iido dheeraad ah.
Recent tirakoobka shaqadu wuxuu muujinayaa in Salesforce uu yahay midka ugu caansan barnaamijyada maaraynta xiriirka macaamiisha (CRM) ee laga heli karo adduunka maanta. Tani waa sababta oo ah ganacsiyada badan ayaa hadda si gaar ah u codsanaya khibradaha Salesforce ee sharraxaadda shaqadooda sababtoo ah ku tiirsanaantooda CRM sidaas darteed tani waa dhiirrigelin lagama maarmaan u ah CV-gaaga.
Koorsadani waxay bixisaa shahaadooyin kala duwan, halka qaarkood ay la xiriiraan IT-ga iyo horumarinta softiweerka, kuwa kalena waxay la xiriiraan suuqgeynta iyo iibinta. Shahaadooyin noocee ah ayaa lagaa doonayaa inay kuxirantahay intaad ku qaadanaysid shaqadaada. Shahaadooyinka la heli karo ee koorsadan ku jira waxaa ka mid ah:
Shahaadadan waxay diiradda saaraysaa maaraynta isticmaaleyaasha, xogta iyo amniga. Ardayda koorsada sidoo kale waxay baran doonaan inay abuuraan warbixino iyo qulqulka shaqada. Shahaadada Maamulaha Salesforce waxay muujineysaa awoodaada horumarsan ee Salesforce CRM
Horumarinta Salesforce, waxaa jira dhowr shahaado oo la heli karo oo muujinaya kartida ardayga inuu ku dhiso kuna hirgeliyo codsiyada barxadda Danab. Haddii aan ku soo koobno ​​faahfaahinta, waxaa loogu talagalay in badan oo loogu talagalay barnaamijyada iyo injineerada doonaya inay dhisaan codsiyada gaarka ah.
Suuqgeeyaha 'Salesforce' wuxuu ka walwalsan yahay barashada sida loo abuuro istiraatiijiyad suuqgeyn bartilmaameed ah oo ku saabsan barxadda Salesforce. Waxaa jira shahaadooyin dhowr ah oo ku jira mawduucan hoose, sida Maamulaha Suuqgeynta Suuqgeynta ama Khabiirka Suuqgeynta Suuqgeynta.
La taliyaha Salesforce wuxuu si wax ku ool ah ula shaqeeyaa macaamiisha iyo macaamiisha wuxuuna hubiyaa inay sida ugu wanaagsan uga faa'iideystaan ​​barxadda. Shahaadadu waxay ku siin doontaa aqoon qoto dheer oo ku saabsan barnaamijka 'Salesforce platform' si aad uga caawin karto ganacsiyada inay xal farsamo u helaan dhibaatooyinka haysta.
Sababaha badan awgood waa inaad si dhab ah uga fiirsataa helitaanka shahaadooyinkan sababtoo ah urur kasta bartilmaameedkiisu waa inay la xiriiraan macaamiishooda ama dhagaystayaashooda si wax ku ool ah. Koorsadani waxay ku siinaysaa xirfadda loo baahan yahay ee isgaarsiinta wax ku oolka ah.
Shahaadada Xirfadeed ee Hogaaminta Kooxda waxay ka walaacsan tahay awoodda dhifka ah ee dadka kale lagu hoggaamin karo. Shahaadadan caalamiga ah ee la aqoonsan yahay waxay caddaynaysaa awoodda aad u leedahay hoggaanka kooxda ee shaqaale kasta oo halkaas jooga.
Nidaamka shahaadada ayaa maskaxdaada u fureysa inaad waxbadan ka barato waxyaabo badan sida:
Hababka hoggaanka kooxda ee kala duwan
Sida wanaagsan loola xiriiro xubnaha kooxda.
Siyaabo wax ku ool ah oo lagu hagaajiyo waxqabadka kooxda.
Kartida aad ku hogaamin karto koox isbedel.
Barnaamijkan tababarka wuxuu ka dhacayaa mid ka mid ah Machadyada Shahaadaysan ee bixiya tababarka IT-yada, oo laga heli karo meel kasta oo adduunka ah, ama xitaa iyada oo loo marayo barashada elektaroonigga ah.
Waxa ugu dambeyntii u qalma musharraxa shahaadada waa ku gudubista imtixaanka xarun kasta oo Pearson VUE ah oo adduunka ah, iyo imtixaanku wuxuu ku kacaa qiyaastii $ 380. Ma jiraan wax shuruudo ah oo loo baahan yahay si loo dhammaystiro barnaamijkan shahaadaynta.
Waxaa jira sababo badan oo lagu helo shahaadada hogaaminta kooxda laakiin mid aad u muhiim ah ayaa ah in dad aad u tiro badan aysan koox si hufan u hogaamin karin. Xaqiiqdii, maaraynta kheyraadka aadanaha waa mid ka mid ah waxyaalaha herculean-ka ugu badan ee maanta dunida laga sameeyo maxaa yeelay ma jiro labo qof oo isku mid ah, xitaa mataano.
Marka, karti aad si hufan ugu hoggaamin karto koox runtii waa karti naadir ah oo qofka ka caawin doonta xirfaddiisa wax ka badan inta la malayn karo.
Shahaadadani waxay aqoonsan tahay awoodda qofku u leeyahay inuu horumariyo howlaha toosan. Asal ahaan, Waxay diiradda saareysaa wax kasta oo la xiriira dhinaca keenista ganacsiga, halkii laga iibin lahaa ama dhinacyada suuqgeynta iyo awooddan, waxaad ku maareyn kartaa silsiladaha sahayda ee dhammaadka illaa dhammaadka iyo sidoo kale inaad sare u qaaddo maalgelinta hay'addaada.
Siyaabaha aad ugu diyaargaroobi karto shahaadadan waxaa ka mid ah inaad iskaa wax u barto, adigoo adeegsanaya agabyada laga bixiyo internetka ama aad uga qeyb geli karto fasalo ay barayaan macallimiinta APICS ee adduunka oo dhan ama Fox Valley Technical College.
Dhameystirka shahaadada waxay la imaaneysaa inaad saxiixdo si aad imtixaanka ugu gasho meel kuu dhow. Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo diiradda saaraya nashqadaynta silsiladda, qorshaynta silsiladda iyo fulinta iyo hagaajinta silsiladda sahayda iyo hababka ugu fiican.
Suuq geyntu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa habka iibka ee ganacsiyada badan ee internetka maanta.
Fikradda iyo nidaamka hawlgalka suuqgeynta Inbound waa ku dhowaad sixir. Waxay u shaqeysaa inay kuu keento macaamiisha halkii aad marwalba u bixi laheyd inaad hesho. Awoodda qofku u leeyahay inuu ku muujiyo khibrad leh caddayn la caddeeyey oo leh xirfaddan suuqgeynta ayaa kor u qaadeysa fursadiisa ama shaqadiisa mushahar sare ee arimahan.
Habka ugu wanaagsan ee lagu soo bandhigo khibraddan waa iyada oo marka hore la barto xirfadda kadibna la helo shahaado heer sare ah oo ku saabsan suuq geynta gudaha shirkad sumcad sumcad leh sida HubSpot.
Koorsooyinka suuq-geynta gudaha waxaa lagu siiyaa bilaash shirkado badan oo suuq-geyn ah oo ay ku jiraan Hubspot waana lagu dhammaystiri karaa khadka tooska ah. Waxaad waxbadan ka baran doontaa aasaaska suuq geynta gudaha iyo sida aad ugu adeegsan karto ganacsi. Koorsooyinka waxay ka kooban yihiin qiyaastii laba saacadood oo fiidiyoow ah, oo leh dhowr su'aalo.
Shahaadadu waa shahaado caalami ah oo laga aqoonsan yahay xakamaynta xisaabtanka IS.
Aasaasiddu waxay ku taariikheysan tahay 1978 waxayna cadeyneysaa awooda aad u leedahay inaad ka warbixiso habraacyada u hogaansanaanta, sida ugu wanaagsan ee aad u qiimeyn karto nuglaantaada iyo aqoonta aad u leedahay heer kasta oo nidaamka xisaabinta ah.
Si aad awood ugu yeelatid inaad koorsadan qaadatid, waxaad u baahan tahay ugu yaraan shan sano oo waayo-aragnimo ah xisaabinta, xakamaynta ama amniga ah ee IS waana inaad dhammaystirto imtixaan kale oo heer-gelitaan ah adigoo maraya nidaamka shahaadada ee ISACA.
Guud ahaan waa la ogyahay in wax kasta oo ay ka mid yihiin shirkadaha waawayn ay u baahan yihiin xisaab hubin maadama diiwaangelintu aad muhiim u tahay. Maalmahan, uma baahnid inaad barato xisaabinta sida koorsada kulliyadda kahor intaadan kudarin qiimaha aaggaas ee ururka aad ka shaqeyso, xitaa haddii aad injineer tahay, helitaanka shahaadadan koorsadan ayaa ah faa'iido dheeraad ah oo kaa caawinaya inaad si wax ku ool ah ugu shaqeyso goob kasta oo aad ku sugan tahay.
Jabsiga anshaxa waxaa lagu bixiyaa iyada oo loo marayo EC-Council, shahaadada Certified Ethical Hacker (CEH) waxay muujineysaa awooda aad ku heli karto u nuglaanta nidaamka kombiyuutarka iyo inaad ka hortagto jabsiga si kasta oo ay howshu u fog tahay.
Hackers anshax wuxuu u adeegsadaa xirfaddan, farsamooyinka iyo aqoon ahaan hacker xun si uu gacan uga geysto aasaasidda tallaabooyin ammaan oo wanaagsan si looga hortago weerarrada mustaqbalka ee ganacsiyada.
Xatooyada anshaxa ee shirkadda waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta macluumaadka shirkadda iyo faylalka gaarka loo leeyahay khataraha ka imaan kara. Amniga iyo asturnaanta ayaa ah arrimo aad xasaasi u ah khadka tooska ah oo wax kasta oo daadanaya midkoodna ay shirkad hoos ugu dhigi karto isha isha.
Koorsadani waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waxay ku siin doontaa meel gees ah goobtaada shaqada. Ma jiro shirkad weyn oo jiri karta oo hawlgal kasta oo khadka tooska ah ku qabata iyada oo aan tixgelin la siinin ammaankooda internetka.
Inta badan wadamada dunida saddexaad, waxaa ka maqan xoog bini aadam arimahan.
Marka ay tahay qaadashada koorsooyinka shahaadada ganacsiga, su'aasha milkiileyaal badan oo ganacsi oo cusub, sida adiga oo kale, ay weydiiyaan ayaa ah 'halkee bay ku qaataan koorsooyinkooda shahaadaynta?' Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah go'aamada ugu muhiimsan ee aad sameyn doontid sidaa darteed waa muhiim inaad qaadato waqtiga oo dhan ee aad u baahan tahay si aad u hubiso inaad sameyso waxa saxda ah. Bilow ahaan, waad hubin kartaa CollegeConsensus.com si aad u aragto liiska kulleejooyinka bixiya koorsada noocan ah.
Tababbarka ganacsigu waa qayb muhiim ah oo lagu aqoonsado meheraddaada oo aad u iibin karto wax soo saarkaaga ama adeeggaaga si wax ku ool ah. Waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad haysato barnaamij tababar ganacsi oo dhameystiran oo daboolaya meelaha muhiimka ah, sida xisaabinta, suuqgeynta, iibka, adeegga macaamiisha, iyo inbadan.
Markaad hubineyso meesha ugu fiican ee lagu qaato koorsooyinka shahaadada ganacsiga, raac talooyinkan:
Meesha shirkadda tababarka ama dugsigu barayo fasalka: Waa fikrad fiican in la helo meesha shirkaddaada tababarka ee hadda jira ay ku barayaan fasalladooda. Tani waa sababta oo ah shirkadaha qaarkood waxay jireen sannado, halka kuwa kale ay jireen oo keliya illaa horaantii 1980-meeyadii. Waxaad dooneysaa inaad ogaato sida koorsada ay tahay waqtigan xaadirka ah iyo haddii ay jiraan wax isbeddelo weyn ah oo ku saabsan nidaamka tababarka ee ay tahay inaad ka digtoonaato.
Loo shaqeeyaha hadda: Waxyaabaha kale ee aad rabto inaad tixgeliso ayaa ah in loo-shaqeeyahaaga hadda jiraa uu bixiyo koorsooyin shahaado ganacsi.Haddii aad hadda ka shaqeysid shirkad ay ahayd inaad wax ka qabato barnaamijyo badan oo tababar sannadihii la soo dhaafay, oo aadan dhib u qabin inaad mar kale la wareegto, taasi waa wax weyn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadineyso inaad kaqeyb gasho barnaamij tababar oo cusub, waa inaad ogaataa ikhtiyaarrada ay bixiyaan.
Koorsooyinka meelo kala duwan: Way ku caawin kartaa inaad koorso ka hesho dhowr meelood oo kala duwan. Shahaadada ganacsigu waxay dabooli kartaa waxyaabo badan oo kala duwan - laga bilaabo ilaha aadanaha, suuqgeynta ilaa iibka. Marka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad barato sida loo wada sameeyo isla waqtigaas.
Tababar gaar ah: Koorsadaadu waa inay kujirtaa wixii tababar gaar ah ee aad horey u heshay. Tababbarka gaarka ah wuxuu noqon karaa koorso gaaban, sida naqshadeynta garaafka, suuqgeynta dhijitaalka ah, ama barnaamijyada kombiyuutarka, oo ku siinaya xirfado cusub oo kaa caawin kara xirfaddaada ganacsi. Kulamada tababarka gaarka ah badanaa waxay bixiyaan shahaadooyin si loo caddeeyo inaad soo martay waxbarashadan oo kale.
Waxaa jira shahaadooyin ganacsi oo dhowr ah oo mudan in la helo in dad badan oo ganacsato ah iyo dadka doonaya fursadaha shaqo ee waaxaha ganacsiga ee shirkadaha aasaasay aysan wax ka ogeyn.
Waxaan u abuurnay maqaalkan si aan uga caawinno ardayda, milkiilayaasha meheradaha, shaqo doonka iyo shaqaalaha inay wax ka bartaan qaar ka mid ah shahaadooyinkan ganacsi, faa iidooyinkooda iyo sababaha ay ugu qasbinayaan in lagu daro CV-yadooda xirfadeed.
Tobanka Dugsi Ganacsi ee ugu sareeya Kanada oo leh deeq waxbarasho
Sida loo tago Harvard Business School Online
Iskuulada MBA ee kuyaala USA bilaa GMAT
Koorsooyin Xirfadeed Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Sida wax looga barto loona shaqeeyo Kanada la'aanteed IELTS
Ganacsiga iyo Shaqooyinka
shahaadooyinka ganacsiga oo mudan in la heloXirfad yaqaan Falanqaynta GanacsigaXirfadlaha Maareynta Mashruuca
Previous Post:5 Talaabo oo lagu helo Khadka Tooska ah ee Aroosyada
Post Next:13 Kulliyadood oo Ka-dhaafaya Shuruudaha Xisaabta